codexmyanmar – King Of Future
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်နာလန်ထူလာမည့်အလားအလာအပေါ် သံသယအသစ်များထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ကမ္ဘာ့စတော့အိတ်စျေးနှုန်းများကျဆင်းပြီးနောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသည် စွန့်စားရသည့်ငွေကြေးများနှင့်ယှဉ်လျှင် ခိုင်မာသည့်ဆွစ်ဇာလန်ဖရန့်နှင့်ဂျပန်ယန်းတို့သည် သောကြာနေ့တွင်အရှိန်မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ အချို့သောလေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Federal Reserve ၏စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများမှာ coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စီးပွားရေးအပေါ်သံသယများရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ကြာသာပတေးနေ့တွင်ဆွစ်ဖရန်ဒေါ်လာသည်တစ်ဒေါ်လာ ၀.၉၉၃၅ သို့မြင့်တက်ခဲ့ပြီးသုံးလအတွင်း ၀.၉၃၇၆ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဆွစ်ဖရန့်သည် ယူရိုငွေကြေးတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်အတွင်းကအခြေအနေနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး ၁.၀၆၆၅ဒေါ်လာ ဖြင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအခြေအနေမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ယန်းသည်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀၆.၇၉ ယန်းသို့တက်ခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့တွင်တစ်လအမြင့်ဆုံး ၁၀၆.၅၈ သို့ ၂.၁ / ၂ လအထိအနိမ့်ဆုံးမှ ၃.၁% ရရှိခဲ့သည်။ ၂ ရက်ကြာအစည်းအဝေးအပြီးတွင်ဗဟိုဘဏ်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အချက်ပြခဲ့ပြီးမူဝါဒချမှတ်သူများသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၆.၅% အထိအလုပ်လက်မဲ့ ဦး ရေ ၉.၃% အထိကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ယူအက်စ်စီးပွားရေးအတွက်အထူးအထောက်အပံ့များပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဗဟိုဘဏ်အရာရှိများသည် အထူးသဖြင့် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Financial …
လုံခြုံစိတ်ချရသောငွေကြေးများကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထိခိုက်ဆုံးရှုံးလာမှာမည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေ Read More »
65 Comments	/ News / By codexmyanmar
?? Novemberလ(2)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(3:25)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် German Manufacturing PMI သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Novemberလ(2)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(4:00)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် Manufacturing PMI သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Novemberလ(2)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(9:30)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် ISM Manufacturing PMI သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _______________________________ ?? Novemberလ(3)ရက် Tuesday မနက်(6:30)အချိန်တွင် U.S President Election သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Novemberလ(3)ရက် Tuesday မနက်(10:00)အချိန်တွင် Novemberလအတွက် RBA Interest Rate Decision သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Novemberလ(3)ရက် Tuesday မနက်(10:00)အချိန်တွင် RBA Rate Statement …
?? Juneလ(12)ရက် Friday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(12:30)အချိန်တွင် Aprilလအတွက် United Kingdom Manufacturing Production MoM သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Juneလ(12)ရက် Friday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(12:30)အချိန်တွင် United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) MoM သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Juneလ(12)ရက် Friday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(12:30)အချိန်တွင် United Kingdom Monthly Gross Domestic Product (GDP) 3M/3M Change သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Juneလ(12)ရက် Friday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(12:30)အချိန်တွင် United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) YoY သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _____________________________________________ ? Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ❤️❤️❤️ Traders များအကျိုးအမြတ် …
Today Important Data ??? ?????????? Read More »
7 Comments	/ Signals / By codexmyanmar
2 Comments	/ Signals / By codexmyanmar
Dec (5) ရက်နေ့က အကြံပြု Trading Signal ရလင်္ဒ်ၤလေးတွေမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ page ကို like and see first လုပ်ခြင်းဖြင့် KOF ရဲ့ အကြုံပြုချက်များကို ရယူပါ ။ KOF
Trump နှင့် Biden တို.၏ စကားစစ်ထိုးပွဲများ နှင့် (၂၀၂၀)အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ မြင်ကွင်း
အမေရိကန်သမ္မတလောင်းများဖြစ်သည့် Donald Trump နှင့် Joe Biden တို.သည် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အရေးပါသော ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Flo Rida မှာ အပြင်းအထန် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မစ္စတာ Bidenက ထောက်ခံသူများကို “မင်းတိုရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ပြသပြီး ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကို ဒီမိုကရက်တစ် အပြာရောင်တွေနဲ့ လွှမ်းခြုံလိုက်ပါ” ရီပက်ဘလစ်ကန်သမ္မတ Mr.Trump က စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်ရရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Bidenက “သူကမင်းတို.ကိုLock down ဆက်ချထားလိမ့်မယ်” လို. သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ (5) ရက် အကြာမှာ မစ္စတာBidenဟာ မဲရုံများမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အနေနဲ့ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Florida ကဲ့သို စစ်မြေပြင်ပြည်နယ် တစ်ခုမှာ အနိုင်ရရှိမဲ့သူက ဘယ်သူလဲလို. ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာ …
Trump နှင့် Biden တို.၏ စကားစစ်ထိုးပွဲများ နှင့် (၂၀၂၀)အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ မြင်ကွင်း Read More »
ရေနံစျေးနှုန်းများကျဆင်းလာမှုနဲ့ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် ဝယ်လိုအားပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ
56 Comments	/ News / By codexmyanmar
Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူဝယ်လိုအားနှေးကွေးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကြောင့်ကြာသပတေးနေ့တွင်ရေနံစျေးနှုန်းများသည် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်။ အမေရိကန်ရေနံစိမ်းသိုလှောင်မှုများအားလုံးဟာ မြင့်တက်နေပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Federal Reserve မှ ရောဂါကူးစက်မှုမှ ပြန်လည်နာလန်ထူလာရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယူအက်စ်အနောက်ပိုင်းတက္ကဆက်အလယ်အလတ် (WTI) ရေနံစိမ်းအနာဂတ်သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှရရှိသောအမြတ်ငွေများမှာ တစ်စည်လျှင်ဒေါ်လာ ၃၈.၄၂ အထိနိမ့်ကျသွားခဲ့သည်။ 0211 GMT မှာအခြေခံစံနှုန်းကန်ထရိုက်စာချုပ်အရဒေါ်လာ (၃၈.၆၁) တွင် ၂.၅% (၉၉ ဆင့်) ကျဆင်းခဲ့သည်။ Brent ရေနံစိမ်း (LCOc1) ၏အနာဂတ်သည်တစ်စည်လျှင်ဒေါ်လာ ၄၀.၈၁ သို့ ၂.၂% (သို့) ၉၂ ဆင့်ကျဆင်းသွားပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အကျိုးအမြတ်များပေးခဲ့ပါတယ်။ စွမ်းအင်သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသော သတင်းအချက်အလက်များအရ ယူအက်စ်ရေနံစိမ်းသိုလှောင်ရုံသည် မမျှော်လင့်ဘဲမြင့်တက်လာသည်မှာ တပတ်အတွင်းစည်ပေါင်း ၅.၇ သန်းအထိဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၅ ရက်မှာစည်ပေါင်း ၅၃၈.၁ …
ရေနံစျေးနှုန်းများကျဆင်းလာမှုနဲ့ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် ဝယ်လိုအားပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ Read More »
Forex လောကထဲ ဘာလိုဝင်ခဲ့တာလဲ?
5 Comments	/ Article / By codexmyanmar
အားလုံးရဲ့ အဖြေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ပိုက်ဆံရှာဖိုဆိုတာပဲဖြစ်မှာပါ …. Traderတွေက အကျိုးအမြတ်ကို လိုချင်တဲ့အတွက် tradingပြုလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာကြပါတယ်။ဒါက လက်ခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်ပိုက်ဆံရှာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး အကျွမ်းကျင်ဆုံး Investor တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Warren Buffett ရဲ့ Rules2ခု ရှိပါတယ်… 1 Never Lose Money2Never Forget Rule Number 1 Trader အများစု ပိုက်ဆံတွေအရူံးပေါ်တယ်ဆိုတာ Strategies မကောင်းလိုမဟုတ်ပါဘူး၊ အရူံးကို မစီမံမခန့်ခွဲတတ်လိုပါ။ Average Trader တွေက $1000 ရှိတယ်ဆိုရင် ok ငါ $100 လောက်အရူံးခံနိုင်တယ်ပေါ့၊ မြတ်ရင်လဲ အမြတ် ရူံးရင်လဲ တစ်ရာထဲပဲဟာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ‌ဆိုပြီး …
Forex လောကထဲ ဘာလိုဝင်ခဲ့တာလဲ? Read More »